အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ပျော့ဖတ်နှင့်ပျော့ဖတ်မှထုတ်ကုန်များကြိတ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သည်. နောက်တစ်ခု, အသားအခြားပါဝင်ပစ္စည်းနှင့်အတူရောနှောနေသည်, လိုအပ်ရင်, အရောအနှောတစ် ဦး သင့်လျော်သောပုံစံသို့ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်. အချောထုတ်ကုန်ကိုကွန်တိန်နာတစ်လုံးထဲတွင်ထုပ်ပြီးဖြန့်ဖြူးသူထံတင်ပို့သည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာများတွင်အသုံးပြုသောအသားထုတ်ကုန်များကိုရေကိုခွဲခြားရန်ပထမ ဦး ဆုံးသန့်စင်ပြီးပြုပြင်ရမည်, အဆီနှင့်ပရိုတိန်းအစိတ်အပိုင်းများ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအရာများစွာသည်မျိုးပွားများသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များ၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းများအဖြစ်ဖော်ပြသည် (သို့မဟုတ်ငါး). ဤပါဝင်ပစ္စည်းများသည်တိရိစ္ဆာန်၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူ့အစားအစာလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များ. ခြောက်သွေ့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာများတွင်,များသောအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်အစားအစာများကိုအစားအသောက်အဖြစ်အသုံးပြုသည် (ဥပမာ၊.
ကြက်နှင့်ကြက်ဘဲများ) အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များဆင်းသက်လာချက်ပြုတ်, အဆီဖယ်ရှားလိုက်ပါ, နှင့်ကျန်ရှိသောပစ္စည်းခြောက်သွေ့သောအမှုန့်စေရန်အခြောက်ဖြစ်ပါတယ်. ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကိုလတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်အေးခဲနေသောပုံစံဖြင့်လည်းသုံးနိုင်သည်. များစွာသောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများထိုကဲ့သို့သောအစေ့၏ထွန်းနှင့်အတူ, ခြောက်သွေ့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာများတွင်အသုံးပြုသောအစေ့များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ကြိတ်သို့မဟုတ်ကြိတ်ပါ, ထို့နောက်ရောမွှေပါ. တစ် ဦး ကစာရွက်မေလလည်းပါဝင်သည်, ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုကယ်တင်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်.
ခွေးအစားအစာ၏ extrusion လုပ်ငန်းစဉ်
အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများမှလွဲ။, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ၏အထွေထွေကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသည်ပြုပြင်ထားသောအစားအစာနှင့်ဆင်တူသည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာများတွင်အသုံးပြုသောအသားထုတ်ကုန်များကိုရေကိုခွဲခြားရန်ပထမ ဦး ဆုံးသန့်စင်ပြီးပြုပြင်ရမည်, အဆီနှင့်ပရိုတိန်းအစိတ်အပိုင်းများ, အပျော့စားသတ္တုတွင်းအပါအဝငျ (ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ) နှင့်ခဲယဉ်း offal (ထိုကဲ့သို့သောအရိုးများနှင့်ခွာအဖြစ်). အများအားဖြင့်, အသားများကိုပြင်ပကုမ္ပဏီမှထောက်ပံ့ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်သူထံပေးပို့သည်. စည်သွတ်အစားအစာအတွက်အသုံးပြုသောအသားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသုံးရက်အတွင်းအသစ်စက်စက်ဖြန့်ဝေပြီးသုံးရမည်. အေးခဲနေသောအသားထုတ်ကုန်များကိုခြောက်သွေ့သောအစားအစာအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်.
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ပျော့ဖတ်နှင့်ပျော့ဖတ်မှထုတ်ကုန်များကြိတ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သည်. နောက်တစ်ခု, အသားအခြားပါဝင်ပစ္စည်းနှင့်အတူရောနှောနေသည်, လိုအပ်ရင်, အရောအနှောတစ် ဦး သင့်လျော်သောပုံစံသို့ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်. အချောထုတ်ကုန်ကိုကွန်တိန်နာတစ်လုံးထဲတွင်ထုပ်ပြီးဖြန့်ဖြူးသူထံပေးပို့သည်.
မျက်မှောက်ခေတ်၌, ခြောက်သွေ့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုမုန့်ဖုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညှစ်ခြင်းဖြင့်ပြီးစေသည်. The အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ စက်ကမူလကမာနထောင်လွှားသောနံနက်စာကျွေးရန်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်, အဆိုပါ extrusion လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်, မြင့်မားသောအာဟာရထုတ်လုပ်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်, ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း - တည်ငြိမ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ. မုန့်စိမ်းကဲ့သို့ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုမပေါ်မချင်းခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမုန့်စိမ်းရောစပ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်. ထိုအခါ, မုန့်စိမ်းကိုချဲ့စက်ဟုခေါ်သောစက်ထဲသို့ထည့်သည်, အရာပါဝင်ပစ္စည်းများချက်ပြုတ်ဖို့ဖိအားရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်ရေပူကိုအသုံးပြုသည်.
အတွင်းပိုင်းအခါ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်, ပစ္စည်းအစွန်းရောက်ဖိအားများနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်. ထို့နောက်မုန့်စိမ်းကိုအပေါက်များမှတဆင့်ဖိပြီးညှစ်ထားသည် (မှိုခေါ်) အထူးအရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံ၏, ထို့နောက်ဓါးဖြင့်ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်. မုန့်စိမ်းသည်မြင့်မားသောဖိအားအောက်တွင်ကျဉ်းမြောင်းနေစဉ်ဤဖြစ်စဉ်ကိုပြုလုပ်ရမည်, တစ်ချိန်ကမုန့်စိမ်းကိုအပိုင်းပိုင်းမြင့်မားသောဖိအား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးသောကြောင့်, သူတို့ကမာန်မာနလိမ့်မည်.